६ महिनाको बच्चालाई छोडेर डिउटीमा गए बाबुआमा, केही बेरमा आयो होस् उड्ने खबर , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
६ महिनाको बच्चालाई छोडेर डिउटीमा गए बाबुआमा, केही बेरमा आयो होस् उड्ने खबर
एजेन्सी । अमेरिकामा एउटा निकै दुखद घटना घटेको छ। गत अक्टोबर ३० तारिखका दिन सो घटना भएको हो। एक दम्पती आफ्नो ६ महिने बच्चालाई घरमै सुताएर आफ्नो डिउटीमा गएका यस्तो भयो कि जुन खबरले तपाईलाई झसँङ्ग बनाउँछ।
दम्पत्ति आफ्नो बच्चालाई घरमा सुताएर डिउटीमा गएका थिए सोही समयमा घरमा एक १० वर्षीया बालिका पनि थिईन्। जसले बच्चालाई काखमा लिएर भुईँमा बजारे । यति मात्रै होईन बच्चा झन् रोएपछि उनले फुट स्टुल उचालेर टाउकोमा हाने।
बजारिएको शरीरबाट असिमित रगत बग्न थाल्यो । जसको जानकारी पाउनसाथ प्रहरीले ति बालकलाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गर्यो। मंगलबार यस घटनाबारे अदालतमा मुद्दा पनि दर्ता भयो ।
प्रहरीका अनुसार बच्चाको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको र रगत निकै धेरै बगेको बताईएको छ। उनको गिलेटे चिल्ड्रेन अस्पतालमा भर्ना गरियो र तत्काल उनका बाबु आमालाई सम्पर्क गरियो । एक्कासी यस्तो घटना भएको जानकारी पाउँदा डिउटीमा रहेका उनका बाबु आमा छाँगाबाट खसेजस्तै भए । अस्पतालमा भर्ना गरिएका ती बच्चाको २ दिनपछि मृत्यु नै भएको छ।
अहिले घटनामा संलग्न भएको आरोपमा १० वर्षीय बालिका पक्राउ परेकी छन्। उनले भनेकी छन् की मैले जानी बुझी नै उसलाई हिर्काएकी हुँ। बालिका अदालतमा आफ्नी आमासँग आएको र टाउका निहुराएर रुँदै बसेको बताईएको छ।